Rio Ferdinand oo sharraxay sida ay Man United u saameysay xiriirkii kala dhexeeyay saaxiibkiis Frank Lampard – Gool FM
Rio Ferdinand oo sharraxay sida ay Man United u saameysay xiriirkii kala dhexeeyay saaxiibkiis Frank Lampard
(Manchester) 29 Mar 2020. Saaxiibtinnimada iyo xifaaltanka kubadda cagta waa labo aanan kala harin, marmarka qaarna isa saameeya.
Rio Ferdinand ayaa qiray in isaga iyo Frank Lampard ku kala biiristoodii Manchester United iyo Chelsea ay saameyn ku yeelatay saaxiibtinnimadoodii.
Labada halyey ayaa yaraantoodii ka soo hana qaaday kooxda West Ham, balse Lampard ayaa ku biiray Chelsea, halka Ferdinand uu ka mid noqday Man United inkastoo Leeds United uu jid-mar ka dhigtay.
Red Devils iyo Blues ayaa ku dagaallamayay ku guuleysiga horyaalka Premier League sanooyin, waxaa Ferdinand uu qiray inay taasi kala fogeysay isaga iyo saaxiibkiis Lampard.
Rio iyo Frank waxay sidoo kale joogto ka ahaayeen qaranka England, waxaana kula jiray magacyo kale oo waa weyn sida Steven Gerrard iyo Ashley Cole.
Balse loollanka u dhexeeya ciyaaryahannada ka socday kooxaha ugu sarreeya horyaalka ayaa ka mid ahaa sababihii ugu waa weynaa ee qaranka Ingiriiska ka hor istaagtay inuu koobab waa weyn hantiyo.
Bartiisa Instagram ayuu ku soo qoray sidan:- “England waa ay u darnayd, maxaa yeelay ciyaartoy waa weyn oo aad u xafiiltama oo ka tirsan Manchester United, Liverpool – waxaan haysannay Stevie Gerrard iyo Jamie Carragher] – iyo Chelsea oo haysatay Frank Lampard, John Terry, Ashley Cole & Joe Cole.
“Sidaas darteed saddexdaas koox waxay ahaayeen saddexda koox ee ugu fiican dalka, si la mid ah Arsenal, waxaanan ahayn dhammaanteen kuwa metela qaranka England.
“Waxaan ahayn kuwa xifaaltama dhammaadka toddobaadka, waxaana imaanaynay, iyadoo xoogaa xaalad xifaaltan jiro.
“Dhammaanteen waan wada qosleynay, balse inuu gudaha ka imaanayay… ma garanayo, wax xoogaa waligey lama wadaagin Stevie, hadda waan ku qosolnaa xaaladdaas, aniga Stevie iyo Frank waxaan ka soo wada shaqeynay BT Sport, waxaan ku qosolnaa ‘sidee sidaas ku ahayn?’” ayuu is weydiiyay Ferdinand.
“Balse waxay ahayd xifaaltan weyn, waa inaad xasuusataa in Frank Lampard uu ahaa saaxiibkeyga ugu wanaagsan kubadda cagta markii aan isla koreynay, waan la hadli jiray, waan arki jiray maalin walba, afar illaa shan sano ayaan qol wadaag ahayn.
“Waxaan noqday mid aanan wax badan la sheekeysanin isaga, sidoo kalena aanan arkin, maxaa yeelay waxaa igu weyneyd inaan guul la gaaro Man United, waana necbaa inuu isaga guul u keeno Chelsea.” ayuu Rio Ferdinand ku sharraxay sida waqtigiisa United uu u dhaawacay xiriirkii kala dhexeeyay Frank Lampard.